ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်အတူဖိုလ်ဒါနှင့် TAGS များ၏အဖွင့်လုပ်ဘယ်လိုနေသလဲ? - WINDOWS ကို - 2019
ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်အတူဖိုလ်ဒါနှင့် tags များ၏အဖွင့်လုပ်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မကြာသေးမီကမဟုတ်ဘဲသိသာမေးခွန်းတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ငါအပြည့်အဝအတွက်ဒီမှာငါပေးမည်။ ဒါ, (အပြာတင့အတွက်မီးမောင်းထိုးပြ) ကိုစာတစ်စောင်၏စာသားကို ...
မင်္ဂလာပါ ယခင်ကငါက Windows XP ကို ​​operating system install လုပ်ထားခဲ့ခြင်းနှင့်အထဲတွင်ငါ့အလိုရှိသမျှဖိုင်တွဲများတစ်ခုတည်းကလစ်အဖြစ်အင်တာနက်ကိုမဆိုရည်ညွှန်းနှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ အဘယ်သူသည်ကို Windows 8 OS ကိုပြောင်းလဲသွားနှင့်ကို double-click နှိပ်ခြင်းဖြင့် folder တစ်ခုဖွင့်လှစ်လာတယ်။ ငါ့အဘို့, ဒီတစ်ခုတည်းကလစ်နဲ့အတူပွင့်လင်းဖိုလ်ဒါအောင်ဘယ်လို Prompt ... ဒါရှက်စရာဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမှန်စင်စစ် default အနေဖြင့် Windows 7, 8, 10 အားလုံးကိုဖိုလ်ဒါ, မောက်ကို double-နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ ဒီ setting ကိုပြောင်းလဲရန်, သငျသညျ (အ tautology excuse) ကိုစပယ်ယာကို configure ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်က Windows ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုခြေလှမ်းနေဖြင့် mini-ညွှန်ကြားချက်ခြေလှမ်းကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
1) စပယ်ယာကိုဖွင့်။ အများအားဖြင့်, အ taskbar ၏အောက်ခြေတွင် link တစ်ခုရှိသေး၏။
ပွင့်လင်းသည် Windows Explorer ကို - Windows7ကို
2) ထို့ပြင်လက်ဝဲအထက်ထောင့်ကလစ်နှိပ်အတွက် link ကို "အမိန့်" ဟုအဆိုပါဖြတ်လမ်း Menu ထဲမှာ, () အောက်ပါပုံရိပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ link ကို "Folder ကိုနဲ့ search options များ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
Folder ကိုနဲ့ search options များ
3) ထို့ပြင်အဆိုပါဖွင့်လှစ်ပြတင်းပေါက်၌, "ဟု pointer ကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ရန်, တစ်ခုတည်းကလစ်နှိပ်ဖွင့်လိုက်ပါ" ရန် slider ကိုနေရာ။ ထိုအခါအပြင်အဆင်နှင့်ထွက်ပေါက်သိမ်းဆည်းပါ။
တဦးတည်းကလစ်နှိပ်ဖွင့်လိုက်ပါ - Window 7
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦးသည် directory တစ်ခုသို့မဟုတ်တံဆိပ်ပေါ်မှာ folder နဲ့သော့ခတ်သို့သွားလျှင် - သင်ကယခု directory (ထို browser မှာကဲ့သို့) ရည်ညွန်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်ရပါလိမ့်မည်, သင်ပေါ်မှာတစ်ချိန်ကကို click ပါကချက်ချင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် ...
ဘာဖွစျခဲ့: သင် folder တစ်ခုကျော်ပျံဝဲအခါ link ကိုတစ်ဦး browser မှာ link တစ်ခုလိုပဲ။
Windows ကို 10 (8, 8.1 - အတူတူပင်)
1) (ဆိုလိုသည်မှာအကြမ်းအားဖြင့်စကားပြော,) ... သာမောင်းထုတ်ရန်ရှိသည်သောမည်သည့်ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်လှစ်သည့်စပယ်ယာ run လိုက်ပါ။
2) ထိပ်တွင်တစ်ဦး panel ကို "View" menu ကို select လုပ်ပါ, အဲဒီမှာဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက် "options-> အဆိုပါ Folder ကိုနဲ့ Search Options ကိုပြောင်းလဲပစ်" (သို့မဟုတ်ပဲညာဘက်အရာက Options button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ။ အောက်ပါပုံရိပ်အသေးစိတ်ပြသထားတယ်။
အဲဒီနောကျသငျသညျဆိုလိုသည်မှာအောက်ပါပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းက "mouse ကိုကလစ်" ရှိ "အစက်" ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် "တစ်ဦး pointer ကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့, တဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူဖွင့်လှစ်" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပွင့်လင်းဖိုလ်ဒါတကလစ်နှိပ် / Windows 10 ကို
ထို့နောက် settings ကိုကယ်တင်နှင့်သင်ပြုသောအမှုဖွင့် ... အားလုံးသင့်ရဲ့ဖိုလ်ဒါလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းကလစ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်, သင်ကသူတို့ကိုကျော်ပျံဝဲအခါသင်က browser မှာ link တစ်ခုပါလိမ့်မယ်လျှင်အဖြစ်ဖိုင်တွဲမီးမောင်းထိုးပြနေသည်ကိုဘယ်လိုမြင်လိမ့်မည်။ အငြိမ့်တဖကျတှငျ, အထူးသဖြင့်ဒီရန်အသုံးပြုကြသူ။
သင်သည်ထိုစပယ်ယာငြီးငွေ့ get လျှင်ယေဘုယျအားရံဖန်ရံခါဆွဲထားတဲ့: သင်တစ်ဦး folder ထဲမှာသွားပါ, အထူးသဖြင့်အခါ, ဖိုင်တွေကိုထားတဲ့အတွက်အများကြီး - ငါဖိုင်ကို-တပ်မှူးများမဆိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါတကယ်စုစုပေါင်းတပ်မှူးနဲ့တူ - စံတစ်ခုအကြီးအမှူးများနှင့်အစားထိုး။
နာမတော်ဖြင့် sort နိုင်စွမ်း, ဖိုင်အရွယ်အစား, ယင်း၏အမျိုးအစား, etc - ။ မျိုး option ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, ဖွင့်တဦးတည်း button ကို mouse ကိုနှိပ်!
အတော်ကြာအစိတ်အပိုင်းများသို့ပျက်ပြားခြင်းနှင့်စည်းဝေးပွဲကိုဖိုင်တွေ - အသုံးဝင်သောသငျသညျ (ဥပမာ) နှစ်ခု flash drive ကိုသို့ကြီးမားတဲ့ဖိုင်လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်,
တဦးတည်းကလစ်အတွက် - သာမန်ဖိုလ်ဒါအဖြစ်ဖိုင်တွေဖွင့်ရန်စွမ်းရည်, ၏သင်တန်း, မရရှိနိုင် archive ကိုအပေါငျးတို့လူကြိုက်များ archive ကိုကို formats ဇီပ်: စသည်တို့ကို, gz, 7z, rar, အငှား ZIP; ။
အဆိုပါ ftp-server များသို့ချိတ်ဆက်နှင့်သူတို့ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ပြီးအများကြီးပိုတာ ...
စုစုပေါင်းတပ်မှူး 8,51 ၏မျက်နှာပြင်
စံဖို့အကောင်းဆုံးအစားထိုး - ငါ့အနှိမ့်ချအမြင်, စုစုပေါင်းတပ်မှူး၌တည်၏။
အလုံးစုံအားမိမိရှည်လျားဆုတ်ခွာနေ finish ကို, ကောင်းသောကံ SIM တွင်!